Miyuu Suarez diyaar u yahay inuu kala qeyb galo xulkiisa Uruguay tartanka Copa America 2019? – Gool FM
(Spain) 09 Juunyo 2019. Weeraryahan kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu kala qeyb galo xulkiisa Uruguay tartanka Copa America 2019.
32 jirkan ayaa sheegay inuu ka war qabay inuu qeyb ka noqon doono tartanka Copa America 2019 kaddib shaqadii adkeyd uu soo qabtay, isagoo sheegay inuu dareemayo in xaalad fiican uu ku jiro islamarkaana uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka ugu horeeya xulkiisa ee tartankan.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Luis Suarez kaddib kulankii saaxiibtinimo ay la ciyaareen Panama waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan dareemay fiicnaan kaddib markii aan ciyaaray kulankeygii ugu horeeyay tan iyo dhaawacii iga soo gaaray kulankii Liverpool, waana ku faraxsanahay inaan dib ugu soo laabto ka qeyb qaadashada kulamada”.
“Waan ogaa inaan dib u soo laaban doono kahor bilaabashada Copa America, kaddib shaqadii adkeyd aan qabtay, marka lagu daro in 10 maalmood uu ka harsan yahay furitaanka tartanka”.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan soo laabto markale oo aan dareemayo fiicnaan jireed sidii aan horey u ahaa kahor inta aan dhaawaca la kulmin”.
Yeelkadeeda, Luis Suarez ayaa maray qaliin dhanka jilibka ah, kaddib dhaawac soo gaaray inta ay socotay ciyaartii lugta labaad ee wareeg afar dhamaadka Champions League ay la ciyaareen Liverpool, taasoo saameyn ku yeelatay maqnaanshiyihiisa kooxda Barcelona kulankii finalka Copa del Rey ay kula ciyaareen Valencia.